Плави Вајат - Blu Chalet
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguDragan
Indlu enkulu ixhotyiswe ngekhitshi eline-oveni, ifriji kunye nefriji encinci, igumbi lokuhlambela elinendlu yangasese, isinki kunye neshawa kwaye inegumbi lokuhlala, igumbi lokulala kunye ne-terrace yangaphandle ekungeneni kwayo. Ilala kamnandi ezintlanu. Yonke imiqamelo, ibhedi, amashiti kunye neetawuli zinikezelwe. Kukho i-terrace yasehlotyeni enkulu, egqunyiweyo ejongene nomlambo, iinduli kunye nelali kwaye ingasetyenziselwa ukuphumla okanye ixesha lokutya, i-grill enkulu yangaphandle kunye nenye indawo yokuhlala eneendawo zokuhlala zelanga.
Yintoni omawuyenze KwiZaeok Zabava unokwenza okuninzi (okanye ngaphezulu) kancinci njengoko uthanda. Kwabo banomdla ngakumbi, ilali ijikelezwe ziindledlana ezintle zehlathi kunye nokuhamba kweenduli kunye neendawo ezimangalisayo. Unokwenza iintaba ezijikeleza ilali ngesikhokelo sethu sengcaphephe sasekhaya-ilungu losapho lwethu ebelihlala elalini amashumi eminyaka. Kwabo batyeleli bangathanda ukuthatha inxaxheba kwizinto ezithile zasemaphandleni nasefama, kukho iqela leeprojekthi ezingqonge ilali abanokuzibandakanya kuzo.
Izibonelelo Indlu enkulu ixhotyiswe ngekhitshi eline-oveni, ifriji kunye nefriji encinci, igumbi lokuhlambela elinendlu yangasese, isinki kunye neshawari kwaye inegumbi lokuhlala, igumbi lokulala kunye ne-terrace yangaphandle ekungeneni kwayo. Ilala kamnandi ezine. Yonke imiqamelo, ibhedi, amashiti kunye neetawuli zinikezelwe. Indlu yinxalenye yeqela lezindlu kunye neendawo zokuhlala ezithatha iihektare ezi-5. Kukho ithala elikhulu, eligqunyiweyo lasehlotyeni elijonge umlambo, iinduli kunye nelali kwaye ingasetyenziselwa ukuphumla okanye ixesha lokutya. Ecaleni kwethafa kukho igrill enkulu yangaphandle kunye nenye indawo yokuhlala eneendawo zokuphumla elangeni. Kukwakho negadi encinci eneziqhamo ezahlukeneyo kunye negadi yemifuno. Kwigadi eyintloko, kukho ujingi, isilayidi kunye nesawhi yabantwana.
Umlambo iZabava uhamba kwidolophana kwaye ulungele ukuloba, ukuqubha kunye nokubheqa. Kuninzi onokuthi uphonononge malunga nelali kunye kufutshane neenduli kunye neentaba ukuba uyanqwenela kwaye iTmuša Cave ikufuphi. Uninzi lwabantu abeza kusityelela beza kuphumla! Sikholelwa ukuba unayo yonke into oyifunayo apha ukwenza kanye loo nto kodwa ukude nobuphithiphithi bobomi besixeko kunye nokuthuthuzeleka - kanye entliziyweni yelizwe laseSerbia elingenakonakala. Ukuba uliqela elikhulu okanye ungathanda ukuxoxa ngokuhlala nathi ngalo naliphi na ixesha, nceda uqhagamshelane nathi kwaye siya kuphendula nayiphi na imibuzo onayo. Sijonge ukukwamkela kuZaseok Zabava :-)
Umbuki zindwendwe ngu- Dragan
Undwendwe lungafikelela kum kwinombolo yeselfowuni 0600112800 okanye kwidilesi ye-imeyile zabavapodmaglesom@gmail.com